Mama Boko Haram: EFCC akpụpụla Aisha Wakil ụlọikpe - BBC News Ìgbò
Mama Boko Haram: EFCC akpụpụla Aisha Wakil ụlọikpe
EFCC na-ebo Aisha Wakil ebubo mpụ ego ruru nde naịra iri isii na isii n'ụlọikpe n'ụbọchị Tọzde na Borno steeti.
Onye ọzọ a na-atụ aka na o so kpaa mkpa mkpa a bụ Tahiru Saidu Daura.
'Social media' enwurula ọkụ maka Aisha Wakil
Nne Shekau: Ahụbeghị nwa m kemgbe afọ 15
Okwu ha bidoro mgbe otu nwoke a kpọrọ Ali Tijjani kwuru na ha gwara ya bunye ha nrị ọka akpọrọ 'Biski' ha jụrụ ịkwụ ya.
Ụlọikpe nyere ha ohere ịgbapụta onwe ha n'ọnụ nde naịra iri atọ ma sị ha bịaghachi n'ọnwa Jenụwarị afọ 2020.
Gaasị agbaala na Legọs
Image copyright Ikechukwu Kalu
Nkenke aha onyonyo Ebe a na-ere okpokoro gaasị
Mmadụ atọ merụrụ nnukwu ahụ oge udu gaasị gbara n'ike n'ogige ụlọoriri na nkwari dị na Victoria Island na Legọs.
Aha ya bụ ụlọ oriri na nkwari bụ Four Point by Sheraton.
Ndị ọkụ gaasị gbagburu n'Abịa agbalitela
Gaasị agbagbuola ụmụaka abụọ na Legọs
Dịka ndị 'Lagos State Emergency Management Agency' (LASEMA) si kwuo, ndị ọrụ ji gas agbado ihe ọkụ mgbe ya bụ ihe mere.
Eburula ndị ahụ merụrụ ahụ gawa ụlọọgwụ dị na Lagos Island.
Jose Mourinho ọ ga-ahụ nke tọrọ fada n'Old Trafford taa?
Nkenke aha onyonyo Nke a ga-abụ mbụ Mourinho na Ole Gunna Solskjaer ga-ezute kemgbe ọ malitere ịchịkọta Tottenham
Jose Mourinho ga-ahụ ma ọ ka bụ anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ mgbe Tottenham na Manchester United ga-ezute taa.
Asọmpi a ga-esu n'ọgbọegwuregwu Old Trafford bụ ebe Mourinho chịkọtara Man Utd afọ abụọ na ụma.
Jose Mourinho: Ekwesịrị inye m ihe nrite
'Wheel' Ole ji buru ndị Man Utd ọdapụla daba n'ime ọhịa?
Mourinho emeriela egwuregwu atọ Tottenham gbarala kemgbe o werela ọchịchị n'ụbọchị Nọvemba 20, 2019.
Ebe ụkwụ na-ama Solskjaer na onwe ya riririri ka o nwetara onye lawa onye lawa abụọ, e merie ya n'otu n'ime egwuregwu atọ ọ gbarala nso nso a.
Nkenke aha onyonyo Liverpool ji akara iri abụọ na isii agafe Everton na tebulu EPL
N'asọmpi ndị ọzọ a ga-enwe n'abalị Wenezdee, Liverpool ga-ezute Everton.
Ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụ asọmpi a ka a ga-eji mara ma onye nkuzi ndị Everton bụ Marco Silva ọ ga-anọ n'ọrụ ka ọ ga-akwara laa.
Chelsea ga-ezute Aston Villa, Leicester ga-ezute Watford ebe Wolves ga-ezute West Ham.
Gbọọnụ ụgwọ unu riri
Ụlọikpe etiti enyela otu a kpọrọ SERAP iwu sị ka ndị niile bụ sinetọ na mịnịsta chịburu dịka gọvanọ mana ka na-eri ụgwọ ezumiike nka, gbọọ nke ha riburu.
— SERAP (@SERAPNigeria) 4 Disemba 2019
Ya bụ iwu nyekwara onye ji akpaego Naịjirịa ikike ịgba ha akwụkwọ ka ha kwuo ebe ha si enweta ikike ha ji eri ya bụ ụgwọ.
Germany achụọla ndị nnọchite anya Russia na be ha
Nkenke aha onyonyo Ndị uweojii na-eme nnyocha n'ogige ebe a gbagburuat the spot in a Berlin park where the Chechen exile was shot dead
Mba Germany achụọla mmadụ abụọ na-anọchite anya mba Rọshịa n'obodo ha.
Nke a bụ maka ebubo ha na-ebo na Rọshịa ma maka mgbagbu a gbagburu otu nwoke onye Chechen na Berlin n'ọnwa Ọgọst afọ a.
Chechen bụ obodo si na Rọshịa wee nwere onwe ha n'afo 1993.
Nweta TIN gị tupu ị were ego n'ụlọakụ - Ahmed
Minista na-ahụ maka akụnaụba obodo bụ Zainab Ahmed, ekwuola na onye ọbụla chọrọ ịdọrọ ego ya n'ụlọakụ na-enweghi ihe Bekee kpọrọ Tax Identification Number site n'ụbọchị abụọ nke ọnwa Jenụwarị 2020, jiri nwayọ dụọ azụ.
Mmiri eburula onye gara ịzọ mmadụ
Nkenke aha onyonyo Nne Ann Nduku kwuru na nwa ya gaara abụ ezigbo onye ọchịchị ma ọ bụrụ na mmiri erighi ya
Ihe mgbawa obi mere ebe nwaagbọghọ chọrọ ịzọpụta otu nwoke ka idemmiri na-achọ iburu ya na mba Kenya, tụnyere ndụ ya.
Nwa agbọghọ ahụ aha ya bụ Ann Nduku dị naanị afọ iri na itoolu, dabara n'iyi Kandisi dị n'obodo Ongata Rongai, dị nso isiobodo Nairobi, n'ụbọchị Tuusde, ụbọchị atọ nke ọnwa Disemba.
Nwoke ọ gara ịzọ anwụghị, mana mmiri buru Nduku eleghi anya n'azụ.
Nne ya bụ Elizabeth Mutuku, nọ ebe ahụ ma hụ ka mmiri na-ebu nwa ya, kwuru na mbọ ọ gbara inyere ya aka lara n'iyi.
A gbaala ndị 'oji mgbọ' na WAEC ama
Ọ bụrụ na ị sọ na ndị 'ji mgbọ' lee ule ' West African Examinations Council' WAEC 1992/1993, asambodo gị efuola ọhịa o.
Ụlọọrụ Jamb depụtara aha ndị ha sị gbara ya bụ mgbọ n'afọ ahụ, ma kwuo na ọ bụ mmerụaka a mere ha ji sie ọnwụ ka ndị niile ga-agbata akwụkwọ ule ahụ site n'afọ a, jiri akara njirimara ndị nwaamala Naịjriịa.
Ihe gọọmentị Naịjirịa nwere ikwu maka mwakpo ndị Naịjiria na Ghana
Abike Dabiri-Erewa bụ onyeisioche ngalaba na-anọchite anya ndị Naịjirịa bi n'ofesi akatọọla mwakpo a malitere iwakpo ndị Naịjirịa bi na Ghana.
Abike gara n'ihu rịọ ndị Naịjirịa ọkachasị ndị a gbachiri ụlọahịa ha ma sị na iwe ewela ha, ma rịọ ndị ọrụ nchekwa mba ahụ ka ha gbaa mbọ chekwaa ndị mmadụ na ngwongwo ha.
Ndị ụlọomeiwu mba Amerịka emeela iwu imegide ihe ha kpọrọ nwụchi na mmegbu ndị ekpere Alakụba Uighur, na mba Chaịna.
Ka ọ dị ugbua, Gọọmentị Chaịna ekwuola na ọ bụ obi ọjọọ mere Amerịka ji ekwutọ ha n'ụdị a.
Man City ji iwe were goolu anọ a satara naanị otu gbajuo Burnley afọ ka ha zutere na Premier League n'abalị Tuusde.
Skip Twitter post by @ManCity
— Manchester City (@ManCity) 3 Disemba 2019
End of Twitter post by @ManCity
Cheta na ha na Newcastle gbara onye lawa onye lawa n'izu gara aga.
Media captionWorld Disability Day: Nwaanyị kpuru isi na-eme achịcha
Ihe mmeri Boris Johnson pụtara n'okwu Brexit?
Friday the 13th: Kedụ nkwenye Ndigbo agbanyeghị ụkwụ na nchọpụta?